दीपिका र रणवीरको विवाहमा पाहुनालाई मोबाइल निषेध ! - Everest Dainik - News from Nepal
दीपिका र रणवीरको विवाहमा पाहुनालाई मोबाइल निषेध !
एजेन्सी । बलिउड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण र रणवीर सिंहको विवाह मिति नजिकीदै छ । र, उनीहरु त्यहीँ अनुसार तयारी गरिरहेका छन । दीपिका र रणवीरको विवाह यही १४-१५ नोभेम्बरमा हुँदैछ । उनीहरु विवाहका लागि इटाली पुगी सकेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस विश्वका प्रभावशाली व्यक्तिको सूचीमा अभिनेत्री दीपिका पर्न सफल
ट्याग्स: deepika padukon, Mobile off, Ranabir Singh